Kaadhadhka xoqida ee khadka tooska ah All - Dhammaan macluumaadka lagu bilaabayo ciyaarta
Kaararka xoqida ee internetka
Kaararka xoqida ee caanka ah ayaa jiray ilaa 90-meeyadii, dad badan ayaa si joogto ah u iibsada kaarka xoqista. Si kastaba ha noqotee, maahan qof walba inuu ka warqabo inaad sidoo kale ka ciyaari karto kaararka xoqida qadka. Ku ciyaarista kaarka xoqida khadka tooska ah wax badan kama duwana tikidhka aad ka iibsan karto dukaanka. Si kastaba ha noqotee, haddii aad dooratid inaad ka ciyaarto khamaarista khadka tooska ah, waxaad leedahay dhowr faa'iidooyin. Waxaad heli doontaa a bonus soo dhaweyn hadaad akoon samaysato oo aad amaah iibsato. Waxa kale oo aad haysataa noocyo aad u ballaadhan oo kaararka xoqida ee internetka ah oo aad kala dooran karto. Waxaa jira nashqado iyo mawduucyo kala duwan, waxaa jira wax qof walba u baahan!
Boggan waxaad ka heli kartaa wax dheeraad ah oo ku saabsan soo bandhigista kaararka la xoqdo iyo kaneecada internetka ee aad ku ciyaari karto. Intaas waxaa sii dheer, waxaad horeyba iskudiyareyn kartaa qaar kaararka xoqida ah oo bilaash ah adoo adeegsanaya boggan, sidaa darteed waxaad ogaan kartaa mowduucyada kaladuwan iyo howlaha ciyaarta.
Sideed uga ciyaari kartaa kaararka xoqida qadka?
Ku ciyaarista kaararka xoqida internetka dhab ahaantii waa wax aad u fudud, marka hore dooro ciyaarta aad rabto inaad ciyaarto. Tilmaamahaaga jiirka waxaad ku riixi kartaa sanduuqyada kala duwan ee kaarka xoqitaanka si aad u xoqdo. Kadib waxaad isla markaaba arki doontaa inaad ku guuleysatay abaalmarin. Dhab ahaan inta calaamadood ee isku mid ah ee aad u baahan tahay inaad hesho waxay kuxirantahay nooca kaarka xoqan ee internetka aad ciyaarayso. Marwalba uma baahnid inaad gujiso sanduuqa-sanduuqa si aad u furto. Sidoo kale badiyaa waxaa jira badhan leh, tusaale ahaan, qoraalka "xoq wax walba", adoo adeegsanaya shaqadan sanduuqyada oo dhan si otomaatig ah ayaa loo xoqaa. Waxa kale oo jira astaamo dheeri ah oo ciyaarta ah oo aad la kulmi karto. Tusaale ahaan isku dhufashada, tani waxay ku dhufaneysaa abaalmarinta lacagta ee aad ku guuleysatay qodobo cayiman. Tusaale ahaan, haddii aad ku guuleysatay abaalmarin lacageed oo ah € 10 oo la socota isku dhufashada 5x, waxaad ku guuleysan doontaa € 50!
Isku day si bilaash ah
Ku dhowaad casino kasta oo internetka ah ayaa bixiya kaararka xoqida ee internetka oo aad ku ciyaari karto bilaash. Xulo mawduuc kaar xoq ah oo kugu habboon adiga iskuna day astaamaha kala duwan ee ciyaarta. Haddii aad ciyaarto kaararka xoqida ee bilaashka ah, dabcan, kuma guuleysan kartid abaalmarinno lacageed oo dhab ah. Ma rabtaa inaad ku guuleysato abaalmarin lacageed oo dhab ah? Kadib ku ciyaar khamaarka internetka ee ku yaal degelkan isla markiiba waxaad heleysaa gunno soo dhaweyn ah.
Waa maxay farqiga u dhexeeya kaarka xoqista warqadda iyo kaarka xoqidda ee internetka?
Farqiga ugu caansan waa, dabcan, mid iska cad. Waxaad ka iibsan kartaa kaar xoqan warqad ah meel saldhig gaas, tobacconist ama supermarket. Intaad ku ciyaareyso kaarka xoqida internetka internetka internetka. Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale jira kala duwanaansho laga yaabo inay yar yihiin wax muuqda. Waxaan inta badan ka hadlaynaa boqolkiiba bixinta halkan. Markaad iibsatid kaararka xoqida warqadda, waxay ku siinayaan ciyaaryahan ahaan lacag bixin boqolkiiba 45% ah ugu badnaan 55%. Celcelis ahaan, boqolkiiba intaas la mid ah waxay dib ugu laabanaysaa bixiyaha ciyaarta si loo buuxiyo abaalmarinta abaalmarinta. Si kastaba ha noqotee, markaad ku ciyaareyso kaararka xoqida internetka, boqolkiiba boqol bixinta aad ayey uga sarreeyaan. Boqollaalkan lacag-bixinta waxay u dhexeeyaan 89% illaa iyo inta u dhiganta 96%. Tani dabcan waa mid aad kaaga roon adiga ciyaaryahan ahaan, celcelis ahaan waxaad fursad weyn u leedahay inaad ku guuleysato abaalmarin lacageed!
Talooyin adiga ciyaaryahan ahaan ah
Hoos waxaan ku siineynaa xoogaa talooyin taasi waxay ku imaan kartaa anfacaya markaad ku ciyaarto kaararka xoqida ee internetka. Tusaale ahaan, kaliya ha isku dayin inaad ku ciyaarto kaar xoq ah abaalmarin sare oo aad u weyn. Faa'iido darrada tan ayaa ah in kulamadani ay u badan tahay in aan la siin isku-darka guusha. Tani waxay la xiriirtaa xaqiiqda ah in noocan ah kaarka xoqan loo qaabeeyey hab in abaalmarinta ugu weyn ay tahay in sidoo kale laga maalgeliyo meel. Taasi waa dabcan sidoo kale macquul, abaalmarinta lacagta waxaa loo bixiyaa si ka dhakhso badan maxaa yeelay ciyaarta "waxay u keydineysaa" abaalmarinta ugu weyn. Haddii aad doorbideyso inaad si joogto ah ugu guuleysato abaalmarin lacageed oo yar, kaliya raadso ciyaarta kaararka la xoqo oo ay la socoto miis bixinta oo ay ku taxan yihiin abaalmarinno yaryar. Iskuday inaad horay ugula heshiiso miisaaniyad naftaada horay waxaad ugu qarash gareyso kaararka xoqida ee internetka. Waxaa jira shaqooyin kala duwan oo la dhisay, si aad awoodi karto inaad si dhakhso leh ugu dhex marto miisaaniyaddaada ciyaaraha. Tusaale ahaan, haddii aad wada ciyaarto dhowr kaar oo xoq ah isla mar ahaantaana ama aad inta badan doorato xulashada "xoq dhan", dhaqso ayey u socon kartaa.
Goorma ayaan ku guuleystaa abaalmarinta lacagta? Waqtiga aad ku ciyaareyso kaararka xoqitaanka casino ku yaal degelkan waxaad ku guuleysan kartaa abaalmarinno lacageed oo dhab ah. Waxaad ku guuleysan doontaa abaalmarin markaad xoqdo dhowr calaamadood oo isku mid ah. Tirada calaamadaha iyo nooca astaamaha ayaa ku kala duwan nooc kasta oo kaar xoq ah.
Waa maxay fursadda ku guuleysiga kaarka xoqidda internetka? Celcelis ahaan, boqolleyda bixinta waxay kudhowaad yihiin 89% ilaa 96%. Tani waxay ka dhigan tahay inaad fursad weyn u leedahay inaad ku guuleysato abaalmarin lacageed!
Noocee ah kaarka xoqida ee aan ka ciyaari karo khadka tooska ah? Waxaa jira tiro badan oo kaararka xoqida ah si loogu ciyaaro khadka tooska ah oo leh mawduucyo badan oo kala duwan. Intaas waxaa sii dheer, waxaad mar mar ikhtiyaar u leedahay inaad tikidhada badan ciyaaro isla waqtigaas, ama waxaa jira abaalmarin dheeri ah oo dheeri ah oo lagu guuleysto.
Miyaan sidoo kale ka ciyaari karaa taleefankayga ama kiniinkayga? Haa, maalmahan waxaad ku ciyaari kartaa dhammaan noocyada kaararka xoqida labada kaniini iyo taleefan labadaba.
Kala sooc sida Articles
Bogga ugu weyn » Kaararka xoqida ee internetka